Basikety – «Amboaran’ny filoha» : famaranana kely ny an’ny MB 2 All sy ny TMBB | NewsMada
Coup dur pour les Barea: Morel, Anicet, Mombris et Mathyas, également forfaits ...mars 18, 2021
Tahotra ny firongatry ny Covid-19: Mitombo isan’andro ny sekoly manakatom-baravarana ...mars 18, 2021
Tafakatra 9 ny maty, 5 naratra mafy…: nisotro toaka “nanala lolo”, mamo ilay mpamily
Plateforme de l’enseignement privé : “La fermeture des écoles n’est pas une option obligatoire”
Voasambotra, niakatra fitsarana, omaly…: mpanao “bizina” fanafody dimy naiditra am-ponja
Témoignage choc de Béatrice Atallah: «J’étais sous assistance respiratoire»
Firaisana tsikombakomba – Trafikana sokatra: zandary roa lahy tratra ary naiditra am-ponja
Epidémie de Covid-19 : la barre des 500 morts atteinte
Mitantara i Sariaka, niady mafy tamin’ny Covid-19 : “Efa nionona ny vady aman-janako hoe ho faty i Neny…”
Covid-19 : plus de 500 contaminations en 24 heures
Hakana 2 tapitrisa Ar ny iray…: tratra ireo mpanondrana vehivavy mankany Arabia Saodita sy Koweit
Haute cour constitutionnelle: un nouveau président d’ici le 16 avril
Basikety – «Amboaran’ny filoha» : famaranana kely ny an’ny MB 2 All sy ny TMBB
Par Taratra sur 06/04/2017
Hangotraka ny fihaonana ampahefa-dalana amin’ny fiadiana ny “Amboaran’ny filoha”, taranja basikety, sokajy lehilahy. Anisan’ny goavana ary andrasan’ny rehetra ny fifandonan’ny samy ekipan’Analamanga.
Hifantoka etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, amin’ity alakamisy ity, ny sain’ny mpitia basikety rehetra eo amin’ny fiatrehana ny ampahefa-dalana, amin’ny fiadiana ny “Amboaran’ny filoha”. Hanamarika izany ny fihaonan’ny samy Analamanga, ny TMBB sy ny MB 2 All.
Hiendrika famaranana kely ny fifandonan’izy ireo, izay ekipa diso mifankalala tsara. Fanintelony amin’izao no hihaona izy ireo, tato anatin’ny roa volana. Nitovy ny isan’ny fandresena hatreto, ary tsontsori-mamba isarahana ity.
Marihina fa voalohany tao amin’ny sokajy “A” ny TMBB rehefa nahavita lalao telo. Nandresy indroa sy resy indray mandeha, ary manana isa 5. Fahefatra, tao amin’ny vondrona “B”, kosa ny MB 2 All, izay resy intelo misesy.
Heverina kosa fa mety ho lalaon’ny mpanazatra ny an’ny Cospn sy ny Ascut avy any Atsinanana. Hatreto aloha, sahirankirana ny Ascut nandritra ny fifanintsanana. Na izany aza, mety efa manomana taktika vaovao izy ireo hiatrehana ny mpifanandrina aminy. Ny Polisy, izay nitana ny laharana voalohany ary mbola vonona handavo izay rehetra mifanehatra aminy.
Ry zareo Cosfa (Bebaoty) kosa, hanohitra ny ASCB Boeny, izay manana mpilalao kinga sy havanana. Raha ara-taratasy aloha, manantombo ry zareo Boeny, saingy mbola ady io. Ny Zandary avy any Vakinankaratra indray, hifampitana amin’ny SBBC Boeny. Lalao heverin’ny rehetra fa tena hisehoan’ny fahaiza-manaon’ny mpilalao satria samy manan-talenta ny andaniny sy ny ankilany.
Eo amin’ny vehivavy, hifanandrina ny Tamifa Amoron’i Mania sy ny CRJS Atsinanana ary adin’ny samy Analamanga ny an’ny MB 2 All sy ny Fandrefiala.
Tsiahivina fa mpanohana ofisialy ny fifaninanana ny Telma malagasy.
DES IDEES EN GOGUETTE (Alliance92) 2021-04-14 #Audio 14/04/2021
Vovonan’ny sekoly tsy miankina: “Hanokatra ny sekoly amin’ny 19 avrily” 14/04/2021
Tao anatin’ny telo volana monja… : mahatratra 213 ny isan’ny zaza very teto an-dRenivohitra 14/04/2021
Basikety-U15 Skills Challenge: ny roa voalohany no tafakatra 14/04/2021
Kitra – Orange Pro league: nomontsanin’ny Uscafoot 2 no ho 0 ny 3FB Toliara 14/04/2021
FAKAFAKA: Kolontsaina miandry vahiny!
… En passant